အလွန်အမင်းထိရောက်သောပြည်သူ့ pdf ၏7အလေ့အထများ - Free books download
ငါတို့ရှိသမျှသည်အောင်မြင်ချင်တယ်။ နှင့်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုငျသောအလေ့အထများကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါက Stephen Covey ရဲ့အရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုစတင် “အလွန်အမင်းထိရောက်သောပြည်သူ့ pdf ၏7အလေ့အထများ” အကြံပြုပါသည်။
1989 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ပထမဆုံးထုတ်ဝေမှာ Highly ထိရောက်သောပြည်သူ့ pdf ၏7အကျင့်တစ်ခုနီးပါးလက်ငင်းအရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့လျင်မြန်စွာယဉ်ကျေးမှုအဘိဓာန်တစ်ခုအမြဲတမ်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျော်ကို 25 သန်းမိတ္တူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 40 ကျော်ဘာသာစကားများကိုရောင်းနှင့်အတူ။ ဤစာအုပ်စာဖတ်သူများသန်းပေါင်းများစွာသောသူတို့ဘဝပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်လာကူညီနေဆဲဖြစ်သည်။
သငျသညျခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းအလွန်အမင်းထိရောက်သောလူတွေ pdf လမ်းညွှန်များ၏7အလေ့အထများ:
1 သငျသညျခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းအလွန်အမင်းထိရောက်သောလူတွေ pdf လမ်းညွှန်များ၏7အလေ့အထများ:
အောင်မြင်သူလူများ၏အလေ့အကျင့်ကဘာတွေလဲ? အလွန်အမင်းထိရောက်သောလူများ၏7အလေ့အထများ 25 နှစ်များအတွက်စာဖတ်သူများယစ်ပါပြီ။ ဒါဟာသမ္မတနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, ဆရာ, ဆရာမများ, မိဘများနှင့်ကျောင်းသားများအများ၏ဘဝတွေကိုအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ တိုတောင်းသောများတွင်အသက်အရွယ်နှင့်ဝန်ခံလူသန်းပေါင်းများစွာခုနစ်အလေ့အထများဒေါက်တာ Covey ရဲ့စာအုပ်ကနေအကျိုးပါပြီ။ ထိုအကြောင်းကိုသင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
တက်ကြွသော Be: စိုးရိမ်စရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်စက်ဝိုင်း၏စက်ဝိုင်း၏အယူအဆအပေါ်ဆွေးနွေးချက်များ။ ဒါဟာချဲ့ထွင်ရန်အဆက်မပြတ်သင့်ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အလုပ်၏ဗဟိုကနေအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ထိုင်နှင့်တက်ကြွ mode မှာစောင့်ဆိုင်း, အရေးယူမယူမီဖြစ်ပေါ်ဖို့ပြဿနာများအတွက်စောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့။
စိတျထဲမှာအဆုံးနှင့်အတူ Start: သင်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်အညီစီစဉ်နိုင်အောင်သင်အနာဂတ်၌လိုချင်တာတွေဆိုပါစို့။ လူတို့သည်မိမိတို့ဘဝအသက်တာ၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘယ်လိုနားလည်ပါသည်။ ထိရောက်သောဖြစ်စေရန်, သငျသညျအခြေခံမူအရသိရသည်ပြုမူခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်သင်၏အမစ်ရှင်ကြေညာချက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျဖြစ်ချင်တာကဘယ်သူလဲ? အဘယ်အရာကိုငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုပြောပါရန်ရှိသည်သလဲ? သင်ဘယ်လိုအောက်မေ့ရချင်သလဲ?
ပထမဦးဆုံးအမှုအရာတို့ကိုသွင်းထား: ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြားခြားနားချက်နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုပါ။ ပြင်ပကမ္ဘာအတွက်ခေါင်းဆောင်မှုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။
win-win စဉ်းစားပါ: သင်၏ဆက်ဆံရေးအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိသောဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်များအဘို့အစိတ်ရင်းမှန်တဲ့ခံစားချက်တွေကို။ အလုံးစုံတို့အဘို့တစ်အောင်ပွဲအပါအဝင်လူတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခြင်းနှင့်လေးစားနောက်ဆုံးမှာပိုကောင်းတဲ့ရေရှည်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက်နားလည်သဘောပေါက်စေမည်အကြောင်း, နားလည်ရန်ပထမဦးဆုံးကိုရှာ: အမှန်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနားလည်သဘောပေါက်ဖို့စာနာနားထောင်သုံးပါ။ ဒီအစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အပြုသဘောပြဿနာများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလေထုဖန်တီးပေးပါတယ်။
Synergize: အပြုသဘောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတဆင့်လူတွေရဲ့အားသာချက်ကိုပေါင်းစပ်ပြီး။ အဘယ်သူမျှမတစ်ဦးတည်းအောင်မြင်ပါပြီနိုင်ကြောင်းရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ရန်။
ကိုစောကြည်လင်ပြတ်သားစေ: Balance နှင့်ရေရှည်တည်တံ့သည့်ရေရှည်, ထိရောက်သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖန်တီးရန်သင့်အရင်းအမြစ်များ, စွမ်းအင်, နှင့်ကျန်းမာရေးသက်တမ်းတိုးဖို့။
အလွန်အမင်းထိရောက်သောလူတွေ pdf ၏7အလေ့အထများ၏အာဘော်အကြောင်း:
စတီဖင် R. Covey ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်မိသားစုဆက်ဆံရေးအပေါ်တစ်ဦးကမ္ဘာကျော်အခွင့်အာဏာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ Utah တက္ကသိုလ်ကနေသိပ္ပံဘွဲ့တစ်ဘွဲ့, တစ်ဦးဟားဗတ် MBA ဘွဲ့ရတစ်ဦး Ph.D ဘွဲ့ကိုရရှိထားသူ ဘရစ်ဂ်ဟမ်လူငယ်တက္ကသိုလ်ကနေ။ မစ္စတာ Covey အဆိုပါ Franklin Covey Co. , ဘုတ်အဖွဲ့ဒုတိယသမ္မတကြီးနှင့်ကထိက, ဆရာမများနှင့်အဖွဲ့အစည်းအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးဒေါက်တာ Covey စာဖတ်သူများနှင့်ကျောင်းသားများသန်းပေါင်းများစွာသောအသစ်အမြင်များနှင့်နားလည်မှုဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။
အခုတော့သင်ကအလွန်အမင်းထိရောက်သောလူတွေ pdf ၏7အလေ့အထများဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဤစာအုပ်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရှာတွေ့ပြီးပါပြီ!
← Өндөр үр дүнтэй хүмүүсийн7зан чанар pdf
अत्यधिक प्रभावशाली मानिसहरूको7वटा आदतहरू pdf →